Manome voninahitra an’i Remmy Ongala, mariky ny sekoly mozika fahiny ny klioban’ny fiara tranainy voalohany sy tokana ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
'Sekoly taloha manaja ny zoky manamory an'i Tanzania' mamerina amin'ny laoniny fiara tranainy
Voadika ny 09 Septambra 2019 5:16 GMT
George Joseph Msambure, mpanorina sady filoha tale jeneralin'ny Oldschool Rides Tanzania, nalaina sary teo anoloan'ireo fiara fahiny milahatra eo ivelan'ny Fetiben'ny Mozika Ongala 2019, Bagamoyo, Tanzania, 24 Aogositra 2019. Sary avy amin'i Amanda Leigh Lichtenstein, nahazoana alalana.
Ao amin'ny lalana be vovoka ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka mangingina ao Bagamoyo, Tanzania, manintona ireo mpamonjy ny fetibe eny an-dalana hamonjy ny Fetiben'ny Mozika Ongala faha-2 fanao isan-taona, natao tao amin'ny Ivon-toeran'ny Zava-kanto sy Kolontsaina (TASUBA) tamin'ity taona ity ireo fiara fahiny nalahatra.
“Nanana fiara raitra ireo zokintsika! Miezaka ny hamerina ny fitiavana ireo fiara tranainy izahay,” hoy i George Joseph Msambure, mpanorina sady tale jeneralin'ny Oldschool Rides Tanzania, fikambanana iray natokana hamerenana sy hankalazana ireo fiara antitra ao Tanzania sy ny faritra. Manana mpikambana 109 izay miha-mitombo, mamory ireo mpankafy fiara tranainy ary miara-miresaka momba ny fiaran'izy ireo tranainy miisa 51, anisan'izany ny 1938 Škoda. Mikarakara fihaonana ihany koa ny vondrona ary mampiseho ny fiarany amin'ny hetsika isan-karazany, toy ny Fetiben'ny mozika Ongala – nomena ny anaran'ilay mpiangaly mozika Tanzaniana malaza Ramadhani “Remmy” Ongala, izay maty tamin'ny taona 2010, tamin'ny faha-63 taonany.
“Nankafy fiara tranainy i Remmy, ary te hanaja izany izahay,” hoy i Msambure. Izany no nahatonga ny fikambanana nitodi-doha nankany amin'ny fetin'ny mozika telo andro mba hampiseho ireo mahafinaritra vitsivitsy nangonin'izy ireo, manomboka amin'ny sekoly fahiny Volkswagen Beetles hatramin'ny fiara fitsangatsanganana Volkswagen Kombi 1979 sy ny BMW 1970s.
Vondronà mpikambana 10 tao amin'ny Oldschool Rides no nitondra ireo fiara avy any amin'ny tanàna maresaka Dar es Salaam nankany Bagamoyo, tanàna feno tantara ihany koa.
Volkswagon Kombi maintso 1979 sy Volkswagon manga 1977 fitsangatsanganana aseho ao amin'ny fampiratiana fiara tranainy ao amin'ny Fetiben'ny mozika Ongala, 2019, nokarakarain'ny Oldschool Rides Tanzania. Saripikan'i Amanda Leigh Lichtenstein, nahazoana alalana.
Volkswagen Beetle 1973 aseho ao amin'ny Fetiben'ny Mozika Ongala, 2019, nokarakarain'ny Oldschool Rides Tanzania. Saripikan'i Amanda Leigh Lichtenstein, nahazoana alalana.
Zatra nitondra fiara Renault fotsy manodidina an'i Dar es Salaam, renivohitra ara-kolontsaina Tanzania i Ongala tenany, hoy i Msambure. Nanoratra andalana avy amin'ny hirany malaza indrindra “Mambo Kwa Soksi,” (Resaka bàn-kiraro|fimailo) aorian'ny fiarany Renault, mampiroborobo ny fampiasana fimailo ho fisorohana ny VIH, araka ny pejy Facebook-n'ny fetibe i Ongala, fantatra am-pitiavana amin'ny hoe “Dokotera” noho ny mozikany rumba Kongoley feno hafatra.
Nalain'i Remmy Ongala tamin'ny faran'ny taona 80 niaraka tamin'ny Renault-ny taloha ity sary ity. Eo amin'ny vatan'ny fiara, nolokoina ity hafatra ity: “Sukari yetu imeingia sumu mambo kwa soksi” na “Niditra tao amin'ny siramamintsika ny poizintsika, anaovy ny fimailo!” – tononkira avy amin'ny hirany malaza indrindra sy mampiady hevitra. Sary avy amin'ny Ongala Music Festival (fetiben'ny mozika Ongala) tamin'ny alàlan'ny Facebook.
Teratany avy any Repoblika Demaokratikan'i Kongo, nifindra tany Tanzania i Ongala tamin'ny taona 1978 ary nanatevin-daharana ny tariky ny dadatoany. Lasa mpiangaly mozika rumba be mpankafy indrindra tany Tanzania izy, mamely ireo sangany eo amin'ny fahefana no sady manasitrana ireo manana fanaintainana amin'ny teny fanantenana amin'ny tononkirany.
Pikantsarin'i Remmy Ongala miaraka amin'ny Renault manga araka ny hita ao amin'ny horonantsary fanadihadiana “Bongo Beat,” notarihin'i Jan Röed ary nalaina tamin'ny taona 1995/1996 tao Dar Es Salaam, Tanzania.
Lehilahy tia olona i Ongala izay nanana fanintonana nitondra azy avy tany amin'ny trano fandihizana amin'ny alina sy toeram-pisakafoanana tao Dar es Salaam nankany amin'ny sehatra iraisam-pirenena World of Music, Arts and Dance (WOMAD) tany amin'ny Fanjakana Britanika (UK), miaraka amin'ny hira toy ny hoe “Songs for the Poor Man,” sy “The Poor Have No Rights,”, izay nanintona ny saina momba ny ny hantsana lehibe eo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena any Tanzania izay firenena sosialista fahiny.
Saripikan'i Remmy Ongala eny an-dalamben'i Dar es Salaam tao amin'ilay fanadihadiana, “Bongo Beat”, notarihin'i Jan Röed ary narakitra tamin'ny taona 1995/1996 tao Dar Es Salaam, Tanzania.
Ho an'i Msambure, izay nikarakara ny fampisehoana fiara Oldschool Rides tao amin'ny fetibe Ongala 2019, momba ny fanovana ny fomba fijery ny soatoavina, ny fahamendrehana sy ny sata no anton'ny fampisehoana ireo fiara tranainy mahafinaritra ireo:
“Tsy noraharahiana ireo fiara tranainy ireo talohan'izao- noheverina fa fiara ho an'ny olona mahantra tsy afaka mividy fiara vaovao. Te-hanaisotra an'io hevitra io ao an-dohan'ny vahoaka aho. Te-hilaza aho fa ireo fiara ireo no tena manandanja indrindra manerana izao tontolo izao!” – George Joseph Msambure, Oldschool Rides Tanzania
Raha ny marina, dia miverina ao Tanzania ny fiara taloha, izay karazana sata nohavaozina ny mitaingina fiara tranainy. Ity maintso maintsina, 1979 VW Kombi ity? hoy i Msambure dia mety ho mahazatra satria niseho tamin'ny horonan-tsary mozika vao haingana antsoina hoe “Nishikilie” (“Tazomy aho”) miaraka amin'ireo kintan'ny mozika Tanzaniana Ali Kiba, Willy Paul ary Omi Dimpoz.
Pikantsary mampiseho VW Kombi ao amin'ny horonantsary mozika “Nishikilie” avy amin'i Ali Kiba sy ireo mpiangaly mozika hafa Tanzaniana hafa tao amin'ny YouTube.
“Mba hahazoana ny [klasika] ho mendrika ny arabe, dia tsy maintsy mametraka vola amin'izany ianao, maka ampahany avy any Fanjakana Mitambatra, Etazonia, Kenya. Hafaranay avy any Libya na Ejypta ihany koa ny ny sasany amin'ireo fiara. Zavatra iray ny vola lany amin'ny fampidirana azy ireo eto. ary zavatra iray hafa ihany koa ny fikojakojana. Tsy ny mekanisianina rehetra no mahalala ny fanamboarana ny mahazatra tranainy. Tena lafo izany! “
Nilaza i Msambure fa ny 98 isanjaton'ny fiara novidiana dia avy any Tanzania, na dia manafatra fiara avy any Afrika Atsimo, noalefahan'ny hetra sy ny vola lany amin'ny fanafarana entana ho an'ny firenena mpikambana ao amin'ny Southern Africa Development Community (SADC), aza ireo mpikambana ao amin'ny klioba. Ny VW Beetle, ohatra, dia nandaniana 23.000.000 shilllings Tanzaniana (10.454 dolara Amerikana) tamin'ny fanafarana azy avy any Afrika Atsimo. Manafatra fiara avy any Japan sy Canada ihany koa izy ireo.
Nilaza i Msambure, izay mahatsiaro fa mankafy fiara tranainy hatramin'ny mbola kely, fa faly be izy mahita ny fitiavany mitondra hafaliana be ho an'ireo izay mankasitraka ireo zavatra tranainy naverina tamin'ny laoniny izao.
“Na ny vehivavy aza – Talohan'izay, dia tsy miraharaha mihitsy ny fiara clasika. Saingy ankehitriny, mandresy lahatra ny lehilahy izy ireo mba haka fiara klasika mandritra ny iray andro hakàna sary na horonantsary amin'ny mariazin'izy ireo. Lasa toy ny lamaody izany ankehitriny. “
Be mpanaraka ao amin'ny Instagram ny Oldschool Rides, manana mpanjohy maherin'ny 20.000, manintona ireo mankafy momba izay zavatra fahiny rehetra – tsy ny fiara ihany fa ireo zavatra tranainy toy ny zavamaneno sy ny fakan-tsary. Mikasa ny hihitatra miaraka amina drafitra lehibe amin'ny fanamoriana fiara klasika mankany Arusha sy hetsika manokana ao Dar es Salaam ny klioba.
“Ny fiara taloha – lamaody mitohy tsy ho faty mandrakizay izany,” hoy i Msambure.
Vavahady ho an'ny fahinin'i Tanzania sy Afrika Atsinanana ireo fiara klasika ireo. “Noho ny asa lehibe [nataon'ireo zokiolona] no misy anay ankehitriny ary [ohatra] tamin'ny asa mafy nataon'izy ireo [ireo fiara ireo] ,” hoy i Msambure.
“Mino ny lova navela izahay, fa angano tsara ny tranainy ary mandrakizay ny angano tsara – ny hitoetra mandrakizay no anjaran'izy ireo,” hoy izy.
Na dia nankalaza an'i Remmy Ongala ho angano tsara aza ireo namonjy ny fetibe, anisan'ny mamerina fanembonana ny lasa ny fijerena ireo fiara taloha nohavaozina hamirapiratra ireo, ary mitondra antsika hiverina any amin'ireo feo sy hira namolavola antsika.